သစ်ကောင်းအိမ် – မဲဆောက်တောင်ခြေ | MoeMaKa Burmese News & Media
မုိုးမခ - ခင်မောင်တုိုး (၁) နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ - သိန်းငှက်ပျိုတုို့ရဲ့သဘာဝ
Beggar Citizen - Call Burma "Po La Pyay" country
သတင်းပဒေသာ - အမာရီလို ဇေယျသုခ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ကျောင်းအပ်ပွဲကျင်းပရန် စီစဉ်
Thet Khaing - Poem
သစ်ကောင်းအိမ် – မဲဆောက်တောင်ခြေ
မူးနော်လေး ‘ကိုဖီအာနန်’ ကိုလည်း
အဲဒီ အဆုပ်လိုက်ပွင့်နေတဲ့ သောကအပူတွေကိုတော့
‘Oh! Great’ ‘Oh! Great’ ဆိုပြီး
‘Crocodile Tears’ မှာ…….
ပဏ္ဍိတတွေကလည်း သူဖုန်းစားပမာ ပညာရှာမြဲ
တတိယအရွယ်တွေကလည်း ငွေကမ္မဌာန်းကို စီးဖြန်းမြဲ
(မူးနော်လေး – ကရင်ဘာသာစကား- အပျိုမ
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း သက်ရောက်အဓိပ္ပာယ်- အိမ်ဖော်)